ओली र विद्या घाँसभित्र लुकेका हरिया सर्पहरु हुन् – भरत दाहाल - Naya Aawaj
१० जेष्ठ २०७८
१० जेठ, काठमाडौँ । विदेशी दलालहरु कति अविश्वनिय हुन्छन् भन्ने यथार्थताको राम्रो उदाहरण केपी ओली र विद्या भण्डारी बनेका छन्। २ बर्ष अगाडी आफैले मजाक उडाएर अस्विकार गरेको नागरिकता षडयन्त्रलाई अध्यादेशबाट पारित गरेका ओलीको अध्यादेश विद्या भण्डारीबाट प्रमाणिकरण गरिएको छ। कुर्सीका लागि निचहरु कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्न यीनीहरुको हर्कत हेरे पुग्छ।
विदेशीसंग विवाह गरेकी नेपाली महिला स्वतः विदेशी हुन्छ, तिनका सन्तानहरू बंशजका नेपाली बन्ने भने के हाे ? विना प्रमाण र कानूनी आधार जन्मकाे नक्कली नागरिकता लिएका विदेशीका सन्तानहरू बंशजका नेपाली बन्ने भनेकाे के हाे ?
जुन अपराधिले आफ्नै नेता, लोग्नेको लाश ढाल्नेहरुसंग घाँटी जोडेर देश बेच्ने दुस्साहस गर्छ, त्यो अपराधिले कुनै पनि अपराध गर्न हिच्किचाहट मान्दैन। देशको अस्मिता चिथोर्ने अपराध मदन भण्डारी र जीवराजकाे लाश चिथोरे जस्तो सस्तो होईन। नागरिकता बेच्ने काे हुन् केपी र विद्या भण्डारी ? यी देशमाराहरु निचलाई सबैले सोध्नु पर्छ- मदन भण्डारी र जीवराजका ह त्यारा को हुन् भन्ने कुरा पहिले सार्वजनिक गर।
=) जेलमा पञ्चायतको सुराकी गरेर १४ बर्ष बिताएका, महाकालीबाट बर्षेनी सवा खरब नोटको बर्ष हुन्छ भन्ने विज्ञापन गर्न ईण्डियन भोंपु (माईक) का रुपमा प्रयोग गरिर्एएका ओलीको राजनीतिक योग्यता के हो ? लिम्यििाधुराको नक्शा विद्यालयका पुस्तक र नक्शामा छाप्न रोक्ने ओली को हो र नागरिकता बेच्ने ?
विद्या भण्डारीलाई याद रहोस् कि उनको राष्ट्रपतिको योग्यता भनेको मदन भण्डारीको लाशबाट विकास भएको सहानभूती र ओलीको निगाह भन्दा बढी केही होईन। सडकबाट छोपेर सिंहासनमा बसाईएको जंगली बाँदरका लागि सिंहासनले जे अर्थ राख्छ, विद्याका लागि राष्ट्रपतिको कुर्सीको अर्थ त्यही मात्र हो।
कुनै नेपालीहरुले यीनीहरुलाई देशमारा ह त्यारा भन्न हिच्किचाउनु हुँदैन। यी देशमारा निचहरुलाई दिने सजाय भनेको फाँ’सि हो। दलाल अपराधिको देश हुँदैन। दलाल अपराधिमा कुनै प्रकारको संवेदना पनि हुँदैन। आफ्नो निच वृत्तिका लागि एउटा पेशेवर अपराधिले जस्तो अपराध पनि गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण ओली र विद्या हुन्।
=) यसको् जबाफ दिने ओली हो कि विद्या ? विद्या भण्डारीकी छोरीहरुलाई अरु कसैले आफ्नो बंशमा मिसाउन पाउने कि नपाउने ? विद्या भण्डारीको घरमा आएर काम गरिरहेकाहरुलाई उनको सम्पत्तिमा बंशजको अधिकार लाग्ने कि नलाग्ने ?
=) ओली र विद्या घाँसभित्र लुकेका हरिया सर्पहरु हुन्
नेपालमा दलाल अपराधिहरुले लादेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नागरिकता हो। राष्ट्रका लागि यदी कुनै यु’द्ध भयो भने त्यो नागरिकता यु’द्ध नै हुन्छ। फिलिस्तीन, श्रीलंका र फिजीलाई हेरे मात्र पुग्छ कि विदेशी जनसंख्या अतिक्रमण भएको देशमा कहिल्यै शान्ति र विकास हुँदैन।
नागरिकतासंग खेल्ने अपराधिहरु कुनै पनि सर्तमा क्षमा गर्न नसकिने अपराधिहरु हुन्। यस्ता अपराधिहरुको कालो थुतुनोलाई गो लीको निशाना बनाउनुको विकल्प हुँदैन। ह त्यारा सवैद मा रिन लायक हुन्छ। ओली र विद्या घाँसभित्र लुकेका हरिया सर्पहरु हुन्।
=) एउटा अपराधिले अपराध गर्छ, लुट्छ, खान्छ र हग्छ मात्र, चुनाव होईन, अब यीनीहरुको विनाशमा केन्द्रीत हुनु पर्छ
देशका नागरिकहरु कोरोनाका नाममा धमाधम मरिरहेका हुन्छन् तर एउटा निकृष्ट दलाल विदेशीलाई बंशजको नागरिक बनाउन ज्यान फालेर लागेको छ। देशका नागरिकहरु धमाधम विदेश पलायन भैरहेका छन् तर एउटा निच दलाल खाली ठाउँ विदेशीले भर्ने अपराधमा लिप्त छ। कहिले यसले सिंहको जस्तो नक्कली आवाज सुनाउँछ र कहिले मोदीको चरणस्पर्स गरेर स्यालको अनुहार देखाउँछ। उसको जीवन वृत्ति यति मात्र हो कि उसले अपराध गर्छ, देश लुट्छ, खान्छ र हग्छ।
जंगलबाट निकालिएका हिंस्रक अपराधिहरुले नेपाल कब्जा गरेका छन्। यीनीहरुको अनुहार र औकात हेरेर नेपालीहरु अब यौटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ। यीनीहरुलाई छाता ओढाईएको दलालतन्त्र र यी अपराधिहरुको उन्मूलन नभएसम्म देशको हालत बिग्रँदै जाने हो। देश भत्काउने र खल्बल्याउने कुरामा सबैतिरका अपराधिहरु एक ठाउँमा छन्। अब चुनाव होईन, यीनीहरुको गर्धनमाथि हतियार सोझ्याउनु पर्छ। यीनीहरुको लुटको सम्पत्तिमाथि धावा बोल्न सबैलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ।
(राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको फेसबुकबाट साभार गरिएको)
केपि, सेरबहादुर, प्रचण्डको झोलेले पाउँछन चै के?
जोखिममा स्कुले विद्यार्थी
अरु अभिनेतासंग नभएर शाहरुख खानसंग भएका यी ४ महङ्गा चिज